Chineke Mezuru Nkwa Ya: Ụlọ Nsọ Dị́ na Jeruselem na Ofufe Chineke
AKỤ̀ NDỊ SI N’OKWU CHINEKE | EZRA 1-5
Jehova kwere ndị ya nkwa na ha ga-amaliteghachi ife ya n’ụlọ nsọ dị́ na Jeruselem. Ma mgbe ha lọtara, e nwere ọtụtụ ihe nyetụrụ ha nsogbu, ya eyie ka ihe ahụ Jehova kwuru agaghị emezu. Otu n’ime ha bụ iwu eze nyere ka a kwụsị ịrụ mgbidi Jeruselem. Ọtụtụ ndị Juu chere na a gaghị arụchali mgbidi ahụ.
Ihe dị ka 537 T.O.N.K.
Saịrọs nyere iwu ka a rụghachi ụlọ nsọ
Ọnwa nke asaa
A rụrụ ebe ịchụàjà; a chụrụ àjà
A tọrọ ntọala ụlọ nsọ
Eze Atazaksis kwụsịrị ha ọrụ
Zekaraya na Hagaị gbara ndị Juu ume ka ha maliteghachi ọrụ
A rụchara ụlọ nsọ
mailto:?body=Jehova Na-emezu Nkwa Ya%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D202016010%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Jehova Na-emezu Nkwa Ya